Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo Warsaxaafadeed soo saaray waxa uu ku aqbalay waqtiga wasaaradda Arrimaha gudaha Xukuumadda Soomaaliya u muddeysay Doorashada Galmudug ee bisha Luuliyo.
Xaaf ayaa sheegay in uu ka laabtay ama laalay heshiiskii Galmudug iyo Ahlu sunna ay ku midoobeen ee ka dhacay dalka Jabuuti, waxaana uu madaxda Ahlu sunna uu ku eedeeyay in aysan tixgelin waxyaabihii ay kala saxiixdeen.
Madaxweynaha Galmudug oo gelinkii dambe shalay isaga baxay Magaalada Dhuusamareeb kadib markii uu diiday in uu la kulmo wafdiga Xukuumadda waxa uu caga-dhigtay Deegaanka Godinlabe.
Maanta ayaa la filaa in uu u ambabaxo Magaalada Cadaado oo uusan tagin ku dhowaad sanad, kuna sugan yihiin Madaxweyne ku xigeenka iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka Galmudug.
Odoyaasha dhaqanka, Xildhibaanno iyo Wasiiru ku taageeray Mowqifkii uu kaga hor yimid Doorashada Galmudug waxa uu xalay kula kulmay Godinlabe, ugu dambeyn waxa uu soo saaray go’aankaan.
Sidaan ayuu u qornaa Warka kasoo baxay Madaxweyne Xaaf:
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug Markuu arkay: Qodobka 50aad, faqradiisa 6aad, 9aad iyo 10aad ee Dastuurka Dowlad Goboleedka Galmudug;
Markuu arkay: Axdi la’aanta Ahlu-Sunna Waljamaaca ay si xurma la’aan ah u muujiyeen;
Markuu arkay: Damaca iyo sad bursiga aan dhamaaneyn ee Ahlu-Sunna Waljamaaca;
Markuu garwaasaday: Ahmiyadda ay leedahay ilaalinta dastuurka iyo heshiisyada Galmudug;
Markuu latashaday: Odoyaasha iyo Waxgaradka beelaha dega Galmudug;
In uu buray heshiiskii Jabuuti ee Galmudug iyo Ahlu-sunna Waljamaca oo lagu saxiixay Muqdisho 06/12/2017.
In laqabto Doorashadii Dowlad Goboleedka Galmudug.
In Dowlad Goboleedka Galmudug iyo Wasaaradda Arrimaha Gudaha kawada shaqeeyaan sidii loo qaban lahaa doorashada iyo dib uheshiisiinta.
In ay dhamaatay kala aragti duwanaan shihii Dowladda Federaalka iyo Galmudug.
In doorashadu ka dhacdo caasimadda kumeelgaarka ah ee Cadaado.
Ayadoo la eegayo qodobka 1aad ee kor ku xusan waxaa buray gabi ahaan wax kasta oo heshiiskii Galmudug iyo Ahlu-Sunna ka dhashay oo ay ka mid tahay:
Badalidda astaanta Galmudug
Badalidda Dastuurka Galmudug
Dhismaha Madaxa Xukuumadda
Badalkii Gudoomiyihii Baarlamaanka iyo Madaxweyne Ku-xigeenkii
Isku darka Golaha Baarlamaanka
Dhismaha Golahii Wasiirada cusbaa
Xeerkan wuxuu dhaqan galayaa marka uu saxiixo Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug.